Imaaraadka iyo Israel oo ka wada hadlaya sidii loo dhisi lahaa dhuun shidaal oo mareysa Sacuudiga.
The AU commander-in-chief visits UPDF troopers on
the dismay of teachers fleeing the jihadist threat
Imaaraatka iyo Israel ayaa ka gorgortamaya sidii ay u dhisi lahaayeen dhuun shidaal. Sawir: Reuters.
Dowladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Israel ayaa diyaarinaya wado ay maraan maraakiibta oo gacan ka geysan doonta sidii loo badbaadin lahaa kharashka shidaalka ceyriin ee booyada lagu sii mariyo kanaalka Marinka Suweys ee Masar, iyadoo lacag loo keenayo Israel.
Saxaafadda Carabta ayaa 20-kii Sebtember werisay in saraakiisha Israa’iil ay wadahadallo la yeesheen Imaaraadka Carabta (UAE) si loo sameeyo dhuun shidaal oo ka ka baxda Imaaraadka Carabta illaa dekedda Israel iyada oo loo sii marayo Sacuudi Carabiya.
The UN “quite optimistic” about a lasting ceasefire after…
mediation is progressing in Farabougou, where government involvement…
Sida ay sheegeen aqoonyahanada dhaqaalaha, mashruucan wuxuu ka qaadi doonaa Bariga Dhexe saliida ceyriin iyadoo la geyn doono suuqyada Yurub wuxuuna meesha ka saari doonaa jidadka marinka Hormuz, ee loo sii mari jiray xeebta Soomaaliya.
Adeeggan maraakiibtu wuxuu gacan ka geysanayaa sidii loo badbaadin lahaa kharashka ku baxa daabulidda saliidda cayriin ee booyadaha ay mariyaan kanaalka Suweys ee Masar Khubarada ayaa rumeysan in Israa’iil ay u badbaadi doonto lacag aad u tiro badan sanad walba mashruucan.
Wadashaqeyntan waxaa la sameeyay ka dib markii Israel iyo Imaaraadka ay heshiis nabadeed ku saxiixeen Sebtember 15 Mareykanka.
Intaas ka hor, labada dhinac waxay sidoo kale iska kaashadeen duulimaadyada iyo diyaaradaha ganacsiga ee loo ogol yahay in ay dul marto Saudi Arabia. Shirkad maraakiib ah oo laga leeyahay Israel ayaa damacsan in ay ka shaqeyso marin dalxiis oo u dhexeeya Dubai iyo Israel.
axadle 992 posts
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo ku eedeeyay madaxda DFS boob ka dhan ah Matalaadda Gobaladda Waqooyi!
Ethiopia files terror charges against leading opposition activist Jawar Mohammed
The UN “quite optimistic” about a lasting…
Xiddig Google Ku Raadiyay Magaciisa Ka Dib Markii La
Mesut Ozil Oo Warbixin Ka Soo Saaray In Laga Reebay Liiska
The UN “quite optimistic”…
Xiddig Google Ku Raadiyay Magaciisa Ka…
Mesut Ozil Oo Warbixin Ka Soo Saaray In…